Uhlaselwe kubangwa igama lozongena njengekhansela | News24
Uhlaselwe kubangwa igama lozongena njengekhansela
UMnuz Bongani Ngcobo othi uhlaselwe ephuma emhlanganweni we-ANC ngoLwesithathu.PHOTO: supplied
UKHALA ngobhululu bekhansela othi uhlaselwe ephuma emhlanganweni wegatsha le-ANC ngoLwesithathu olwedlule e-Elandskop.
Usazikhotha amanxeba uMnuz Sandile Ngcobo (34) onguSihlalo wentsha ngaphansi kuka ward 8 othi uhlaselwe ephuma emhlanganweni obusehholo lomphakathi kwaVulindlela ngeledlule.
Uthi umsindo ususwe ukungaqokwa kwekhansela elikhona uBethwell Ngcobo ukuba libuyele esikhundleni emuva kokhetho lohulumeni basekhaya mhlaka 3 ku Agasti.
“Bekuphakanyiswe amagama amane nalo elekhansela likhona kodwa kuthe uma kuvotwa kwacaca ukuthi kuthwelwe ngeqoma uMakhosazana Ngcongo nogcine ephakanyiswe njengekhandidethi elisha kwesobukhansela.”
Uthi labo abacheme nekhansela elikhona njengamanje bazwakalisa ukungagculiseki kwabo kulomhlangano owawubanjwe emasontweni amabili edlule nokuthe ngoLwesithathu olwedlule baphazamisa ukwethulwa kwalelikhandidethi elisha.
“NgoLwesithathu sesithula loyo ozongena kwesobukhansela babekhona futhi emhlanganweni nokwathi sesiphuma baqala amaculo ayenamagama ayiziswana bethi abahambisani nokhethiwe.
“Babe sebevala isango bachitha nomgqomo kadoti babasa nomlilo bethi akekho ozophuma ehholo.”
UNgcobo uthi leliqeqebana labe selisabisa ngokuthi lizoshaya ikhandidethi elisha elikhethiwe nelagcina seliphume ngesamagundane ngemoto eyagcina ijikijelwe ngamatshe.
“Bagcina bengenela thina ngesibhaxu bethi ithina esifake ikhansela elisha, mina bangishaya ngenduku esiphongweni kanye nangensimbi ekhanda, ngalesosikhathi ikhansela lalikhona lizihlalele emotweni lingazami nokulamula,” kusho uNgcobo othe kwasiza ukuthi kuqhamuke amaphoyisa babe sebephunyuka.
IKhansela uBethwell Ngcobo lithintwa mayelana naloludaba lithe angeke likwazi ukuphefumula ngalo kwabezindaba labe seliyalela ukuba kuthintwe usihlalo we-Screening Committee ewadini naye onqabile ukuphawula.